osisi ọzụzụ na-esonye osisi na-arụ ọrụ oge-oge agụmakwụkwọ
Onye na - arụ osisi - Osisi
Ngalaba 1th nka
N'ime usoro Hout ị ga - emecha modul 2:
Na modul Nkụzi Ọrụ Ntuzi mụta otú e si eji ngwá ọrụ, tinye usoro ihe mgbakwunye na ịrụ ọrụ ụlọ na ngwaọrụ ndị a na-eji aka. Na modul Ịkụzi osisi kụziere gị ka ị rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu na ígwè ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ị ga-amụta iji tụọ ma gbakọọ akụkụ, jiri ngwá ndị na-atụ aro, na-eji osisi siri ike na ihe mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ n'ime ígwè.
Ya mere, ị na-amụ ihe dị ka ndị ọkachamara na ndị ọkachamara nke na-elekọta ọrụ nke akwụkwọ ntuziaka na ịrụ ọrụ igwe.
Ị na-amasị na-arụ ọrụ gị aka
Ị na-eji nlezianya arụ ọrụ
Ọzụzụ ọkwá nkà osisi na-ewe na nkezi afọ abụọ ruo afọ anọ.
Ị na-amalite na nhazi akwụkwọ nhazi osisi.
Na akwụkwọ nke onye na-arụ ọrụ ntuziaka Ị kwenyesiri ike banyere ọrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị ka ngwaọrụ.
Ị na-amatakwa ịrụ ọrụ na CNC igwe.
Ndị na-arụ osisi na-enwe mmasị na ahịa.
Maka ọzụzụ Ọkụ osisi ịkwesighi ịchọta ihe ọmụma nke insider pụrụ iche.
Ị ghaghị ịchọta ma nwee mmasị na osisi dị ka ihe. I kwesịkwara ịtụ egwu igwe.
Kedu ihe ọrụ gị dị ka ọ dị, oleekwa ọrụ gị nwere?
Dị ka onye na-arụ ọrụ nkụ, i nwere ọtụtụ ohere n'ime ụlọ ọrụ osisi. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dịka onye na-arụ ọrụ n'ime ime, onye ọrụ, onye na-arụ ụlọ, ma dịka onye na-arụ ụlọ.
Dị ka onye na-arụ ọrụ ime ime ka ị na-etinye ọnụ ụzọ, ọnụ ụlọ, bọmbụ, mgbidi na akwa ụlọ. Dịka onye na-arụ ụlọ, ị na-eme kichin, eji ejiji ma na-elekọta ebe a na-etinye ihe dị iche iche.
N'ikpeazụ, ị ga-aga ọmụmụ ihe a ọrụ.
Ịzụ nkuzi nkuzi nkuzi oge niile
Na ọzụzụ osisi A na-enye igbe ndị na-esonụ: onye ọkwá nkà n'èzí, onye na-arụ ọrụ n'ime ime ụlọ, onye na-arụ ọrụ nkà, onye injinia ime ụlọ;
Ị ga-amụta, n'etiti ihe ndị ọzọ, windo, ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ ámá, (nkedo) ihe nkedo, nsị na nhazi.
Ị na-amụta kichin, ụlọ e wuru n'ime ụlọ, mgbidi ndị na-adịghị ọcha, ọnụ ụzọ dị n'ime ụlọ, ụlọ elu ụlọ, ngwongwo na steepụ ... na-eme ma na-etinye.
Ma nwekwara: verandas, terraces na ihe ndị e ji osisi rụọ iji wuchaa ụlọ ma ọ bụ chọọ mma.
Ịkụziri osisi Buiten-ọkwá nkà dị ka ihe atụ 4 modul:
Nhazi nke chalkwork n'èzí
Ọrụ e ji arụ ọrụ n'ebe obibi
Ị mụtara iche igwe igwe dozie, rụọ ọrụ ma dị ọcha.
Ị ga-amụta ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ na igwe ma na-enye aka ngwaọrụ na nke a oge-agụmakwụkwọ oge.